Labada Aqal Ee Maraykanka Oo Xaqiijiyay Guusha Biden Iyo Guuldaradii Doorashada Kaddib Inqilaabkii Awoodda U Addeegsaday Trump Ee La Fashiliyay - #1Araweelo News Network
Warar / World News | By admin
“Umma sujuudi doonno sharci-darro ama cabsi gelin. Waxaan ku laabannay shaqooyinkayaga, oo waxaan samayn doonnaa caawa.”ayuu yidhi McConnell, oo ah hoggaamiyaha Aqalka Senate-ka ee Jamhuuriga.
Washington(ANN)-Xaaladda Dalka Maraykanka ayaa si weyn looga cabsi qabaa aduunka oo dhan, kaddib isku daygii Madaxweynaha lagaga guulaystay doorashadii tallaadadii November 2020, ee Trump oo weli ku taagan inuu yahay midka guulaystay.
Rabshado waaweyn oo xallay ka dhacay dalka Maraykanka ayaa sababay in taageerayaasha Trump kasoo daabulay Michigan, Bridgeport, Saginaw County iyo meelo kale, ayaa qabsaday aqalka dhismaha caanka ah ee Capitol, halkaas oo ay ku shirayeen labada aqal ee Baarlamaanka si ay go’aan lagu xaqiijinayo natiijada doorashada muranka weyn dhalisay uga gaadhaan, isla markaana dib u eegis ugu sameeyeen tirada codadka wakiiladda ee (Electoral votes).
Kongaraska Maraykanka, waxa soo weeraray kooxda taageerayaasha Trump, kuwaas oo gebi ahaanba qabsaday dhismahaa, iyadoo markaa kaddib la fasaxay labada aqal, kaddib markii ay taageerayaasha Trump si fawdo ah ula wareegeen dhismahaa oo ay Booliska iyo ciidamada kale ee amaanka soo jiidheen.
Bandaw ayaa lagu soo roggay magaalada, waxaana la dalbaday ciidamo dheeraad ah, iyadoo warbaahinta qaarkood laga qaaday qalabkii ay siteen sida CNN, AP, iyo kuwo kale oo weriyayaashoodu ku sugnaayeen agagaarka dhismaha Capitol.
Hase yeeshee kulan danbe oo ay isugu yimaadeen xildhibaanada labada aqal ee Kongaraska, waxay xaqiiqsadeen inay shahaado siiyaan madaxweynaha la doortay ee Joe Biden iyo madaxweyne ku xigeenka la doortay Kamala Harris guushii horaantii khamiista, dhamaadka habeen iyo maalin dheer oo ay ku calaamadaysnaayeen qalalaase iyo rabshado ka dhacay Washington.
Arrintaa ayaa lagu macneeyay inay ahayd mid Awood u ahayd astaan taariikhi ah oo taariikhda casriga ah ee Maraykanka, taas oo awoodda iyo xukunka si uu usii haysto Madaxweynaha lagaga adkaaday doorashada Trump u abaabulo kacdoon rabshado wata gudaha dhismaha aqalka Capitol ee Maraykanka.
“Ku-xigeennadii dhibaatada ka gaystay xaruntayada Capitol maanta, ma guuleysan, “sidaa waxa yidhi, Madaxweyne Ku-Xigeenka Pence oo Madaxweyne ku-xigeenka u ah Trumpo, wuxuuna hadalkaa ka jeediyay mar ay xildhibaannadu kulmayeen kaddib saacado badan oo ay xidhnaayeen. Rabshaduhu waligood ma guuleystaan. Xorriyadda ayaa guulaysata, tanina wali waa gurigii dadka, ayuu raaciyay, Pence.
AKHRI: Boris Johnson Oo Ka Hadlay Taageerayaasha Trump Ee La Wareegay Kongreska Maraykanka
Madaxweynaha la doortay Joe Biden iyo Harris waxay ku guulaysteen codadka wakiiladda 306 (Electoral votes), halka Trump iyo Pence ay haysteen 232. (Electoral votes), waxaana guushu raacdaa cidda hesha 270 tirada guud ee codadka doorashada wakiiladda amma ka baddan, waxayna Joe Biden iyo Harris qaateen guusha taariikhiga ah.
Markii ay Kongaraska ku dhawaaqay guusha, waxa ka hadlay shahaadada, Trump wuxuuna ugu dambayntii qiray guuldaradiisii doorashada, walaw uu yidhi, inkasta oo aannan ku raacsanayn natiijada, “waxaa jiri doona kala guur nidaamsan 20-ka Jan 2021.”
“Marwalba waxaan odhan jiray waxaan sii wadaynaa … dagaalka aan ku hubinayno in codadka sharciga ah oo kaliya la tiriyay. In kasta oo tani ay ka dhigan tahay dhamaadka xilli-ciyaareedkii ugu horreeyey ee ugu weynaa taariikhda madaxweynenimada, waa bilowga halgankeenna in aan mar kale Maraykan Weyneynno!”
Daraasiin ka tirsan xildhibaanada Aqalka Jamhuuriga, oo ay wehliyaan qaar ka mid ah senetarada Jamhuuriga ee taageera Trump, ayaa qorshaynayay inay ka hor yimaadaan Arbacada codadka doorashada ee ilaa lix gobol oo taageeray Biden.
Laakiin goor dambe oo habeenkii Arbacada ahayd, qaar ka tirsan Jamhuuriyiinta Guurtida waxay ka noqdeen diidmadoodii hore, sababtoo ah diidmo kasta waxay u baahan tahay taageerida xubin ka tirsan labada Aqal iyo Guurtida in la tixgeliyo, tusaale ahaan Steve Daines ee Montana, Mike Braun oo reer Indiana ah iyo Kelly Loeffler oo reer Georgia ah ayaa dhammaantood sheegay in ay istaagayaan.
“Hadda ma awooddi karo, damiir wanaagsan, in aan diido shahaado-siinta cod-bixiyayaashan,” Loeffler ayaa sidaa yidhi Arbacadii, waxayna ka kasbatay taageerada asxaabteeda. Loeffler waxay ka mid ahayd laba ka mid ah Jamhuuriga lagaga adkaaday tartankoodii Salaadadii, taasoo siisay Dimuqraadiyiinta awood ay ku yeeshaan Senate-ka Maraykanka oo ay labada aqal u hoggaamiyaan.
Sanatarka Jamhuuriga Missouri Josh Hawley, oo qaatay baaqa Trump ee ahaa in sharci dajiyayaashu diidanyihiin natiijada doorashada, ayaa sheegay habeenimadii Arbacada in Senate-ka ay tahay inay tixgeliyaan diidmadiisa, laakiin ay tahay in laga doodo “rabshad la’aan, weerar la’aan, rasaas la’aan.” Ayuu yidhi.
Sharci-dajiyayaasha Senate-ka ayaa u codeeyay goor dambe oo Arbacadii ah inay diidaan loolanka guusha Biden ee gobolka Arizona, Golluhuna wuxuu raacay mid taas lamid ah, laakiin jamhuuriyiin badan ayaa taageeray in la rogo natiijooyinka gobolka. Natiijo taas la mid ah ayaa loo qorsheeyay gobolka Pennsylvania, iyadoo labada golle ay u coddeeyeen inay diidaan loolanka guusha Biden ee halkaas.
Sharci-dajiyayaasha Aqalka Jamhuuriga ayaa sidoo kale ka soo horjeestay codbixinta doorashooyinka ee Georgia, Michigan, Nevada iyo Wisconsin, laakiin ma jiro senator ku biiray diidmadaa Jamhuuriga.
“Marka ay sidaas tahay, diidmada lama maaweelin karo,” ayuu yidhi Pence oo ku celceliyay, isagoo guddoominaya howlaha ka socda doorkiisa madaxweyne ee aqalka Guurtida.
Labada aqal markaa waxay sii wadeen tirinta codadka oo sii socotay, gobol gobol, iyadoo saddexda cod ee doorashada Vermont ay ka dhigeyso Biden iyo Harris inay ka sareeyaan sumadda 270, ilaa ugu dambayntii saddexdii cod ee Wyoming la tiriyay ee Trump iyo Pence.
Fawdada Trump iyo kooxdiisa ay ku carqaladaynayaan guusha Biden, waxay noqotay mid abuurtay khilaaf weyn iyo kacdoon rabshado watay, waxayse labada aqal u dhaqdhaaqeen si ay u xaqiijiyaan guusha Biden waxayna bilaabantay galabnimadii Arbacada ee hore.
Arrinta caadiga ah ee xafladda, xaqiijinta geeddi-socodka dimuqraadiyadda, ayaa la filayay inay noqoto mid qadhaadh, dadaal saacado badan soconaya sababtoo ah diidmo ay qorsheeyeen xulafada Kongres-ka Trump, ayaa ahayd mid si weyn u abaabulan, in kasta oo ay xaqiiqdii ahaayeen inay la kulmi doonaan guul-darro labada dhinac ah.
Laakiin markii ay howshu bilaabantay, koox xagjiriin ah oo taageersan Trump ayaa galabnimadii Arbacada weerartay Xarunta Baarlamaanka, iyagoo hakiyay tirinta codadka doorashooyinka.
Sharci-dajiyayaasha ayaa laga saaray dhismaha iyadoo rabshadii iyo ka socday ay socdeen, taasoo keentay in magaalada oo dhan lagu soo rogo bandow.
Haeenay ayaa markiiba la sheegay in ay ku dhimatay halkaa, Sidoo kale, waxa ku dhintay sarkaal ka tirsan booliska oo ku sugnaa Capitol. Habeenimadii Arbacada, booliska D.C waxay sheegeen in seddex qof oo kale ay u dhinteen xaalado deg- deg ah oo caafimaad oo ka dhacay agagaarka dhismaha rabshaduhu ka socdeen.
Hase yeeshee qiyaasta saacadda 8 fiidnimo, saacado ka dib markii la jabsaday Capitol, sharci-dajiyayaasha waxaa loo fasaxay inay soo noqdaan si ay u dhammeeyaan dooda oo ay u tiriyaan codadka Kulliyadda Doorashada.
Khudbado gooni gooni ah oo ay ka jeediyeen xunhaha, Afhayeenka Aqalka Wakiilada Nancy Pelosi iyo Hoggaamiyaha Aqlabiyada Gollaha Guurtida Mitch McConnell ayaa wacad ku maray inay sii wadi doonaan ganacsiga ay gacanta ku hayaan, taas ahayd hanjabaad ku socota Trump.
Sidoo kale Sen. Tom Cotton oo ka tirsan Arkansas ayaa sheegay in ay tahay “waqtigii la soo dhaafay in Trump uu aqbalo guuldaradiisa, isla markaana joojiyo marin habaabinta dadka, oo uu iska diido rabshadaha dadka.”
#Trump: Doorashada Wuu Tartamaaya wuuna Guulaysanayaa”Madaxii hore Ee Aqalka Cad - #1Araweelo News Network says:
[…] hore ee Maraykanka, Donald Trump oo laga guulaystay doorashadii 2020, uu doonayay inuu kursiga kusii haysto teeramkiisa labaad, ayaa xilligan la shaaciyay inuu yahay […]